အမေ့သား: July 2012
Posted by အမေ့သား at Tuesday, July 10, 20126comments: Links to this post
မြန်မာတွေကိုများစောက်ချဉ်ထင်နေတယ် နောက်လင်နဲ့ မွေးထားတာ တကောင်မှမပါ
အမေရင်း အဖေရင်း မြန်မာစစ်စစ်ကမွေးပြီး လောကဓံကို ကန့်လန့် တိုက်လာခဲ့ တာ
မင်းတို့ စလုံးတွေလည်တယ်ဆိုတာ ဟိုးအရင် အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးနက်မကို မမှီဖူး
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နှစ်ဝက် ဘောနက်များ အသီးသီးရကြသည်။ ရာထူးများလည်း
ခေါ်လေပြီ့့ ကိုရွှေဂျာ.....................
သူ့ အခန်းထဲ ကော်ဖီသွားသောက်ရပြီ သူပြောမဲ့ အကြောင်းအရာတချို့ ကို
အမေ့သား မေးခွန်းနဲ့ အဖြေ ကြိုရထားနှင့်တာ ဂျာစုတ်မသိပေ..............
အခန်းထဲရောက်တော့ ကွန်ကရစ်ကိုကျုလေးနဲ့ ရှင်းပေါ့
မင်း ရာထူးတိုးပြီ အိမ်ကျယ်နီယာဖြစ်မည်၊ အဓိကတော့ ကျုစီပေါ့ ဘာပေါ့ ညာပေါ့
မင်းဝမ်းမသာဖူးလားတဲ့ဘာတဲ့ညာတဲ့ ပြော.. အလုပ်ကတော့ ဒါလေးတွေပိုလုပ်ပေး
ဟိုဟာလေးတွေလည်း မင်းလုပ်ရမယ်၊ကျန်တာတွေလည်းမင်းဟာပဲ ပြော ပြော
ပါးစပ်နဲ့ တပြည့်ပြော. သူမောတော့မှ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ကိုရွှေဂျာ
မင်းပြီးရင် ငါ့ အလှည့်...... မင်းပေးမဲ့ ရာထူး ငါမလိုချင် လစာလည်း ငါမတိုးချင်
စားပွဲကြီးမှာလည်းမထိုင်ချင်လို့ ဆိုတော့ အံ့သြကြည့်နဲ့ ကြည့် မျက်လုံးကြီးပြူးလာ
အခု ငါ့လစာက ဒီလောက်ကွ ငါ့ အိုဗာတိုင်က တစ်ဆခွဲ နှစ်ဆကွ
လကုန်ရင် ငါရတာက (၆၀၀၀)ကွ (မယုံနဲ့ နော်. နောက်တာ..တကယ်)
ကဲ မင်းအခုပေးမှာ က ဒီလောက်ကွ အိုဗာတိုင်က ပုံသေဆိုတော့
လကုန်ရင် ငါရတော့မှာ က (၅၀၀၀)တည်းကွ (မယုံနဲ့ လို့ ထပ်ပြောမယ်နော်)
ဒီကြားထဲ့ အိမ်ကျယ်နီယာဆိုတော့ စနေ နင်းဂွေးလာရင် မင်းတို့ စောက်ခွက်တွေကမလှ
(အဲလိုခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့)လို့ ပြောပြ အခုဟာက ငါကိုလစာတိုးပေးတာလား
လစာလျှော့ပေးဖို့လားဆိုတော့ ခွေးအ ကြီး လှည်းကျိုးနင်းမိလို အီး အဲ အင့် နဲ့ 
မင်း ကို ဥပမာတခုပေးမယ်လို့ဆရာကြီးစတိုင် ဒူးလေးနန့် ပြီးမသိသေးရင်မှတ်ထားကွ ငါပြောပြမယ်
စလုံးရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆန်ဆန်အတွေးတွေကိုတခြားကောင်တွေသွားပြော
မြန်မာတွေစီသယ်မလာနဲ့ပြန်ပြောပြလိုက်ရင် သောကမျက်ရည်ဘူးသီးလုံးလောက်ကျသွားမယ်
စလုံးမှာ ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ အခါ တခုဝယ်ရင် တခုအလကားပေးတယ် လူတွေတိုးဝယ်ကြတယ် အကုန်မြန်တယ် ရောင်းရတယ် ပြီးတော့ ပိုမြတ်တယ်ကွ တခုဝယ်တခုအလကား (၂၀) ပေးရတယ်
လူတွေကပျော်တယ်အလကားနောက်တခုရလို့တကယ်တန်းအဲသည့် ပစ္စည်းက တခြားမှာဝယ်ရင်
တခုကို(၈)ကျပ်ပဲရှိတယ်နှစ်ခုဝယ်မှ (၁၆)ကျပ် ကဲ (၄)ကျပ်ပါသွားပြီ မမြင်ဖူး မကြည့်ဖူး
အဲလိုလူထဲမှာငါ မပါဖူး ....... ရာထူးတိုးတိုင်းပျော်တဲ့ အထဲမှာငါ ဆိုတဲ့ အမေ့သားမပါဖူးကွ
ရာထူးတိုးပြီး လစာနည်းသွားတာကိုမမြင်တဲ့ငတုံးတွေ(မင်းတို့ လို စလုံးတွေ)ကတော့
ပျော်ချင်ပျော်နေမယ် ငါတော့မပျော်ဖူး အလကားမလိုချင်ဖူး တန်ရာတန်ကြေးပဲလိုချင်တယ်
မင်းတို့ အမြင်မှာ ရာထူးတိုးပေးတယ်လေ လစာလည်းတိုးပေးတယ်လေ ဒါတောင်မလိုချင်ဖူး
စိတ်မှကောင်းသေးရဲ့ လားဆို တဲ့ အကြည့်နဲ့ တော့မကြည့်နဲ့ ကိုယ့်လူ မင်းလိုအဆင့်မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်သမားခေါင်းတောင်မရဖူးလို့(ပြောချင်တာနော်)
အမေ့သားလည်းပြောပြီးရော ငါ မင်းလောက်စီစိပေါက်ပေါက်မတွက်မိဖူးတဲ့မင်းပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲတဲ့(သိရဲ့ သားနဲ့ မသိခြင်ထောင် ထောင်ထားပြီး) ငါ အိပ်အာ ကို ပြောလိုက်မယ် မင်လည်းစဉ်းစားပါအုံး ဘာအုံး ညာအုံး နဲ့ စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နှာပေးနဲ့ ဟီးဟီးဟားဟားလုပ်ပြီး
နောက်တပတ်အကြောင်းပြန် ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုပြီး အခန်းထဲ က အတင်းတွန်းလွတ်လိုက်သည်။
အမေ့သားအတွက်ကတော့ ဘူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ဖင်ခုထိုင်ပြီး
ဆက်လက်ငြင်းဆန် ဖို့ အားမွေးရင်း စကားလုံး ကောင်းကောင်းများရွေးချယ်ရင်း ထိုင်စောင့်ရင်း
နောက်တခါ ကော်ဖီခေါ်အတိုက်ကိုမျှော် ....... မျှော် .......
Posted by အမေ့သား at Wednesday, July 04, 20124comments: Links to this post
Labels: တကယ့် ဟာသ